disguise gx ranga uye xr Workflows Shandura OMEN Dambudziko mune yakasarudzika Zvakaitika | NAB Ratidza Nhau | 2020 NAB Ratidza Midhiya Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza PENYU. Broadcast Inhau Nhau
musha » Content Creation » disguise gx ranga uye xr Workflows Shandura OMEN Dambudziko mune yakasarudzika Zvakaitika
disguise gx ranga uye xr Workflows Shandura OMEN Dambudziko mune yakasarudzika Zvakaitika
Kana OMEN Challenge 2019 yakaitwa muLondon munaGunyana 2019, disguise gx 2c uye gx 1 midhiya maseva yakapa iyo chaiyo-nguva yekuburitsa Notch yezvinyorwa iyo yaiperekedza iyo gameplay. Chiitiko esports ndicho chakatanga kuburitswa vachishandisa disguise xR workflows, iyo yakabatanidza maAugmented, Virtual uye Mixed Reality tekinoroji.
Yechishanu yegore ino OMEN Challenge yakaitwa nerutsigiro rweOENEN neHP, nevatambi vasere vachikwikwidza padhiza yemadhora zviuru makumi mashanu. The Counter-Strike: Global Inoshamwa mumakwikwi akaratidzirwa 50,000-on-1 mechi uye mana-mutambi akafa. Chiitiko ichi chakaenda pamusoro uye kupfuura echinyakare esports shanduro yemafomu, ichipa iyo nhandare yehondo ine yakasarudzika uye inonyudza nhanho uye zvemukati.
Iyo purojekiti, inoitiswa neiyo yekugadzira media agency AKQA, yakaonekwa nekubatana naSchool Millar uye Pixel Artworks, avo vakagadzira nekugadzira bespoke pombi yekushandisa vachishandisa disguise, Notch neTouchDesigner, kugadzira nhepfenyuro isina kumbobvira yaonekwa neAr, Mixed Reality uye rarama showa zvinhu, zvese zvinotepfenyurwa paTwitch uye mamwe mapuratifomu okushambadzira.
"HP yaida kuita chimwe chakasiyana nemahara makuru evhidhiyo e LED, AR uye MR matipi ayo anogona kutaridzika zvakanaka kune vapenyu uye nhepfenyuro yevateereri," anodaro Ruzivo Mugadziri weDigital, achishandira padivi paPixel Artworks kupa simba vhidhiyo yechiitiko ichi vachishandisa kuvanza. Chaiyo-nguva MR yezvinhu yakagadzirwa muNotch, ine data iri kuuya kubva mumutambo kusvika kune simba info info. Iko kwekupedzisira kuburitswa kwakaitwa mukushongedza uye kuburitsa kumadziro evhidhiyo eLED.
Musanganiswa Reality yakashandiswa munzira mbiri panguva yekuratidzira, Scott anotsanangura. Yekutanga yaive mukushandisa Notch yakagadzirwa studio nharaunda, iyo yaitendera vaakanda vatakuri kuendeswa kune imwe nyika mune-kamera. Nyika inogona zvakare kuve yakashandurwa kubva kuinjini yemitambo kuisa ma casters zvakananga mumepu. Chechipiri kushandiswa kwanga kuri kubvumira vatambi nevabvunzurudzo "kupindira" nyika yemitambo uye kutsiva nguva huru. Kushandisa Steadicam uye kupa injini yemitambo mune zvese zviri zviviri LED uye chaiyo nyika, vatambi vacho vaigona kuzviona ivo pachavo mumutambo, uye kurondedzera mafambiro avo akanaka.
"Kuita tichinyatsobatana nemugadziri weEMEN mutambo uye amateur mapaini ekugadzira, isu takagadzira mhinduro yekugadzira chaiyo-yenyika seti, mutambo wemitambo uye zvirimo zvinowirirana nedhijitari yakafanana Isu takagadzira studio chaiyo uye OMEN set iyo, kuburikidza nekamera, zvinoita sekunge munhu chaiye ari mumutambo, "anotsanangura Oliver Ellmers,
Inopindira Mushandisi nePixel Artworks. Izvi zvakawanikwa nekushandisa xR kuwedzera uye kukwiridzira zviri mu-kamera uku uchishandisa MR kutevedzera chaiyo-nhepfenyuro kamera yenyika, kusanganisira kamera kutevera, saka makamera epamhepo anotepfenyurwa airatidzwa pamwe nemadhijitari kamera mumutambo.
Boka rekugadzira rakakunda matambudziko akati wandei eprojekiti, iyo huru ine chekuita nekunyatso nyowani kwetekinoroji iri kushandiswa. "Zvatakasika hazvina kumbobvira zvaitwa nenzira iyi," anodaro Oliver. "Pamusoro peizvozvo, mutambo waive wakasarudzika uye uchimhanya-mhanya: Aya aive mamwe evatambi veMOEN vakanaka kwazvo munyika, uye pakanga pasina mukana wekukanganisa." Vaifanira kubuditsa dhata kubva mumitambo yekukurumidza, kuti fungidzira nezvenhepfenyuro ichishandisa AR uye MR dhizaini mu-kamera yeaiona. Sezvo vaishanda neyekucheka-padanho tekinoroji, pakanga pane zvakawanda zvekufungidzira kunze uye kuyedzwa kwaidikanwa kuzadzisa ipfupi.
Iyo show yakashandisa ina disguise gx 2c midhiya maseva, anopiwa 80six uye Grey Matter, pamwe nemairi gx 1 midhiya maseva, anoita saatenzi uye understudy. Kusimbisa mutambo unopa uye kudzora, pamwe nekubata iyo data yemitambo, matanhatu maTouchDesigner michina yakashandiswa ine tsika kodhi yakanyorwa kudzora injini yemutambo.
"Taifanira kushanda nechimiro chakatipa mukana wekuchinja nekukurumidza, uye kuwana zvinhu izvozvo pamwe hakuwanzo," anodaro Oliver. "Kujairika kwekushanduka, kubatanidzwa kwemamwe masisitimu uye kukwanisa kuona zvakawanda zvakapetwa munzvimbo imwechete zvakatipa mikana isingapiwi nezvimwe zvigadzirwa. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero chakasarudzika chakasarudzwa. "
Mazhinji mabasa nezvimiro zvekushongedza zvainyanya kubatsira pachirongwa ichi. Chaizvoizvo chakasarudzika kuvanza ndeyokugovana furemu pane yetiweki, chimiro chinodaidzwa naOliac “mutambo wakakwana-unoshandura. Tinogona kudzokorora nekukasira uye zvakanyanya zvakanyanya kupfuura zvisati zvaitika, uye kuenderana nenzira hakuna kumbobvira kwakaita nyore kudaro. "
Nekuda kwekushanduka kweiyo disguise mhinduro, timu yakakwanisa kuwana 3-nzira nzira kutaurirana pakati peNotch, TouchDesigner uye disguise. Izvi zvakashanda seamu, uye neye-chaiyo-nguva yekufambisa ivo vakakwanisa kuita iterations nekukurumidza kana paine nyaya dzakauya. "Kuvanza ndiyo chete yaive chigadzirwa chaive nehunyanzvi mukati megadziriro yayo kuita kuti izvi zvikwanise," Oliver anozivisa.
Chiitiko kuronga - AQKA
Ugadziri wehunyanzvi - Scott Millar
Dhizaini yekugadzira - Pixel Artworks
Inoshanda mushandisi - Oliver Ellmers
Kutepfenyurwa Kwese - Flux Broadcast
Notch programmers - Marco Martignone & Lewis Kyle-White
LED & inovanza Server vatengesi - 80six
shandisa Vashandisi uye Vashandisi - Grey Matter
Kutsvaga Kamera- Stype
Vhidhiyo Tech - Laurence Dobie
disguise tekinoroji technology inoita kuti vekugadzira nehunyanzvihunyanzvi vafungidzire, kugadzira uye kuburitsa zvinonakidza zvepamhepo zvinoonekwa zviitiko padanho repamusoro.
Iine tarisiro yekubatanidza chaiyo-nguva 3D visualization-based software ine yakakwira kushanda uye yakasimba michina, ivo vanogonesa kuendesa kwemapurojekiti ekugadzira akaoma padanho uye nekuvimba.
Inoshandura pfungwa kuva chaiyo, kuvanzika kune mahofisi muLondon, Hong Kong, New York, Los Angeles uye Shanghai, nezvikwata zvehunyanzvi kwese kutsigira zvinodiwa nevatengi, pamwe nekutengesa kwakanyorwa munyika dzinodarika makumi mashanu.
Ine anogara achiwedzera wepasi rese network network uye achishanda pamwe nevasarudziro epasi rese ane tarenda rekuona uye timu dzehunyanzvi pazviratidziro zvepasi rese zvevashanyi zvinosanganisira U2, The Rolling Stones, Beyoncé, Pink! naEd Sheeran, zviitiko zvepamoyo zvinosanganisira Coachella uye Moscow International Mutambo, mitambo yemitambo yemitambo yakadai saFrozen naHarry Potter pamwe nehuwandu hwekuwedzera hwemafirimu, nhepfenyuro yeTV, kushamwaridzana uye zviitiko zvevaraidzo - kuvanza kuri kuvaka chizvarwa chinotevera chemushandirapamwe wekushandisa batsira maartist nehunyanzvi kuti vaone chiratidzo chavo.
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Graham Chapman Prmoted toEditor kusangana isovideo, viarte, HDR, kuderedzwa kwevhu, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, kucheka kwe bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw Spears & Misoro TVU Networks Ultra HD Forum Video Engineer	2020-02-04
Previous: Kansas City's WDAF FOX 4 Debuts Image Spot Munguva yeMutambo Mukuru neCustom Song kubva kuna Stephen Arnold Music
Zvadaro: DPP 2020 Kufanozivisa Kunoratidza Kuti Global Media Trends Iri Kuita Sei KuDanho Remunharaunda